Showing १-१० of १,४४८ items.
मगर सङ्घ धरान–१ को अध्यक्षमा हेलिना
विजयपुर । नेपाल मगर सङ्घ धरान उपमहानगर वडा नं. १ को अध्यक्षमा हेलिना पिठाकोटे मगर चयन भएकी छन् ।शनिबार धरान–१ मा सम्पन्न भेलाले हेलिनाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय कार्यसमित चयन गरेको हो । समितिको सचिवमा सुमि थापा मगर, कोषाध्यक्षमा रनमाया राना मगर, सदस्यहरूमा यमबहादुर लुङ्गेली मगर, सर्किनी थापा मगर, कमला राना मगर, उत्तरा थापा आले मगर, सर्मिला थापा मगर र सुस्मा थापा मगर चयन भएका छन् । धरान नगर समितिको सङ्गठन विस्तार अभियान अन्तर्गत वडा नं. १ को समिति गठन गरेको सङ्घका धरान अध्यक्ष चित्रराज थापा मगरले जानकारी दिए । भेलामा नेपाल मगर महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मीना पुलामी मगर, नेपाल मगर सङ्घ धरान नगर
सामाजिक कार्य होस या विवाह, पूजाआजा, मेला, सभा सम्मेलनजस्ता कार्यमा नेवार समुदाय रामपुरको अग्रसरता छ । आफ्नो संस्कृति र परम्परा जोगाउँदै हरेक क्षेत्रमा यहाँको समुदाय सक्रियरुपमा सामाजिक कार्यमा जुटेको पाइन्छ । फरक–फरक समुदायको बसोबासको थलो बनेको छ, रामपुर । पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी (सुस्तापुर्व) को केन्द्रका रुपमा रहेको रामपुरमा नेवा समुदाय सामाजिक कार्यमा अग्र पङ्क्तिमा छ । संस्कृति र परम्परालाई जोगाउन कन्याको सामूहिक बेलविवाह, बटुक (कुमार) को व्रतबन्धजस्ता कार्यलाई एकैथलोमा राखेर गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै संस्कृति र परम्पराको
धिमाल समुदायको पर्व राजारानीबाट सुरु भएर उर्लाबारीमा समापन
पथरी । धिमाल समुदायको महान पर्व जात्री/सिर्जात पर्व विधिवत रुपमा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरि समापन भएको छ ।मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको भोगटेनी स्थित राजारानीमा बैशाख २ बाट सुरु उर्लाबारी–३ मगलबारेको धिमाल जातीय विकास केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय परियोजना स्थल (दस बिघे) मा समापन भएको हो । जात्री÷सिर्जात पर्व प्रत्येक वर्ष बैशाख २ गते उद्गम स्थल मानिने लेटाङ नगरपालिकाको भोगटेनी स्थित राजारानीको धिमाल ग्रामथामबाट सुरु हुने गरेको छ ।पर्व समापन विहिबार प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले धिमालहरू नेपालका सबैभन्दा पुराना आदिवासी र भूमिपुत्र भएको उल्
कबिर जयन्ती मनाइयो
विराटनगर । ५६८ औं कबिर जयन्ती विविद्य कार्यक्रम आयोजना गरि मनाएको छ । विराटनगर ९ बाटारोडमा श्री गुरु कबिर साहेब स्थानले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरि कबिर जन्यती मनाएको हो । कबिर जयन्तीमा माला अर्पण, शान्ती भोजन र प्रवचन भएको थियो । महात्महरु विसुणदेव दास, चम्बु महात्मा, बलारम दास थापा मगर, सतिचन महात्मालगायले प्रवचन दिएका थिए । विराटनगरमा आधा दर्जन बढी कविर मठमन्दिर रहेको सो मन्दिहरूमा पूजा पाठ हुने गरेको श्री गुरु कबिर साहेब विराटनगरका अध्यक्ष बाबुप्रसाद यादवले बताए ।
प्रकाशित मितिः जेठ २९, २०७९
लिम्बूका मौलिक संस्कारसम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक
धरान । अम्विकाकुमार सम्बाहाम्फेद्वारा लिखित लिम्बूका मौलिक संस्कारहरू सम्बन्धी पुस्तक ‘याक्थुङ येत्छाम खाजोङ्हा’ सार्वजनिक भएको छ ।शनिबार किरात याक्थुङ चुम्लुङको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रदेश १ का पूर्व प्रदेश प्रमुख प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले पुस्तक सार्वजनिक गरे । लिम्बू समुदायमा मौलिक संस्कार गर्न जान्ने मान्छे घट्दै गएको सन्दर्भमा प्रकाशित यो पुस्तकले नयाँपुस्ताहरूलाई समेत लिम्बू संस्कार, संस्कृति बुझ्न र पालना गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, ‘लिम्बू समुदायमा संस्कारहरू मौखिक रूपमा रहेकाले ठाउँ अनुसार फरक पर्ने र कतिपय हराउँदै जाने अवस्थामा छन् । यसरी पुस्तकका रूपमा आएपछि सबै
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आ –आफ्नो घरको मठमा तुलसीको दल राख्दै छन् । प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको दल राख्ने गरिन्छ । यस दिनलाई निर्जला एकादशी पनि भनिन्छ । यस दिन रोपेको बीउ एक महीनापछि आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन रोपिन्छ । आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिन्छ । यसलाई तुलसी हुर्काई बढाई दामोदरसँग विवाह गरिने भन्ने पनि बुझिन्छ । यो चार महीनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ । चतुर्मासमा स्नान, पूजन र दान गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । निर्जला एकादशी समेत भनिने भएकाले यस दिन पान
‘मौलिक सांस्कृतिक पर्वहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ’
धनकुटा । आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक सांस्कृतिक पर्वहरूको दिगो विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले सोमबार बताएका छन् । किरात राई यायोक्खा साँगुरीगढी गाउँ कार्यसमिति धनकुटाको आयोजनामा भएको साकेला उँभौली समापनमा बोल्ने वक्ताहरूले सांस्कृतिक पर्वको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिन आग्रह गरे । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद् धनकुटाका अध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राईले हरेक जातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति बाँचे मात्र त्यो जातिको पहिचान स्थापित हुने बताए । उनले हरेक जातिको पहिचान युगयुगसम्म बचाएर राख्न स्थानीय सरकारले हरेक जातिको भाषा, संस्क
खुवालुङ भिडियो सार्वजनिक; जनप्रतिनिधिलाई सम्मान
धरान । किरात राईहरूको आस्थाको केन्द्र खुवालुङका विषयमा निर्माण गरिएको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।किरात राई सांस्कृतिक कलाकार सङ्घको १७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार धरानमा भिडियोको सार्वजनिक गरिएको हो । सालिक सतासक राईले निर्देशन गरेको भिडियोमा सप्तकोसीमा रहेको खुवालुङको मुन्दुममा आधारित कथा प्रस्तुत गरिएको छ । सैनिक भवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले भिडियोको विमोचन गरे । कार्यक्रममा किरात राई समुदायका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई पुरस्कार तथा विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई सम्मान गरिएको छ । सो अवसरमा १० हजार राशिक
लुम्फुङ्वा वंशावलीको दोस्रो संस्करण लोकार्पण
विजयपुर । लुम्फुङ्वा वंशावलीको दोस्रो संसरण लोकार्पण भएको छ । शनिबार धरान १५ स्थित चुम्लुङ हिमको हलमा लोकार्पण भएको हो । लुम्फुङ्वा कल्याणकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर लुम्फुङ्वाहरू पहाड, मधेश, इलाम र काडमाण्डौ उपत्यकामा गरी ३९७ घरधुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रेम येक्तेनले वंशावली लुम्फुङ्वा लोकार्पण महत्वपुर्ण भएको बताए । कार्यक्रममा डा. कमल तिगेलाले नेपालमा वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार लुम्फुङ्वाहरूको पुख्र्यौली भूमि, माछा मार्ने, जगरबगर संस्थागत रुपमा प्राप्त गरी संरक्षण गर्ने कानुनी आधार भएको बताए । लुङ्फुवा वंशावली दोस्रो संस्करणको लेखन र सम्पादन नरबहादुर लुम्फ
प्रकाशित मितिः जेठ १५, २०७९